Anthelmintic ngoba amakati kanye kittens - Ukukhetha futhi isicelo
Yini anthelmintic for namakati ukukhetha? Lena inkinga ezibhekene bonke abathenge wekati. Maye, ezithangamini kakhulu nemitholampilo eminingi wezilwane ukuphendula lo mbuzo sinikezwa ejwayelekile "Thenga" Drontal ". Lesi sidakamizwa udume ngempela. Mhlawumbe yingakho ngakho ngokuvamile baqala ukuvela inkohliso, okuyinto kuleli cala engcono akusho ukuzibonakalisa kuleli okubi kakhulu - isilwane uye ukulashelwa ubuthi. "Drontal" - anthelmintic esihle kakhulu amakati, nge spectrum ezibanzi umsebenzi, okuyinto ekahle kakhulu. Nokho, ungakwazi ukuthenga kuphela emitholampilo, odokotela bezilwane. Lokhu kubhekiswe kuzo zonke imithi (amavithamini, immunostimulants, anthelmintics, amashampu, njll).
Zonke anthelmintics zingahlukaniswa zibe "yethu" (ukukhiqizwa lendawo, eshibhile) futhi "hhayi okwethu" (amazwe, ezibizayo). Nokho, ngaso sonke isikhathi intengo aphansi uthi izinga ezingabazisayo.
Kwenye indawo okwakuvinjwe amasayithi inhlolovo wezilwane abanikazi cat lwenziwe ukucacisa isilinganiso udumo esetshenziswa ukukhipha izikelemu. imiphumela inhlolovo zimi kanje:
"Profender" (amathonsi, isicelo nezokusigcoba).
"Prazitel" (Ukumiswa, efanelekayo amazinyane).
"Inqaba" (amathonsi, isicelo nezokusigcoba).
"Pyrantel" (umthamo ukumiswa -1.2-ml kg).
Konke lokhu mithi anthelmintic nge spectrum ezibanzi umsebenzi, kodwa kuhluke isicelo. Ukumiswa ubhekwa kuwusizo kakhudlwana, futhi iconsi elilodwa Shintshela ngokuwa ukubulala izinyoni eziningana ngetshe elilodwa futhi unciphise worming futhi zigcwele mordant, ngisho amasonto ambalwa ngeke azivikele kabusha ukutheleleka. amaphilisi Anthelmintics for namakati nokushintsha kokudla nokufakwa elula kakhudlwana. Abayishumi balaba izimali kuyinto azinake, isinqumo ngesakho kuphela.
Manje, indlela sinikeze anthelmintic ikati. Ake uqale nge iqiniso lokuthi izidakamizwa kuyadingeka ukuze kulesetayelekile ngokuqinile ngokuvumelana isisindo sesilwane. Akuwona wonke ikati anthelmintic isudi: kubalulekile ukuba acabangele engu kanye pet isimo salo (isilwane esigulayo is contraindicated).
Amalungiselelo ngesimo amaconsi (endaweni pipette ngokuvamile iqukethe umthamo owodwa) sisetshenziswa ngokuqinile phezu buyabuna, ngomusa ephakamisa uvolo. Kusemqoka ukuthi izindlela siyishaye esikhumbeni. Umuthi kuyokwenzeka ngemva sifakwe emanzini, ukuze kuphela isicelo lesifanele kungaqinisekisa umphumela.
Ukuze "ukondla" iphilisi ikati, kudingeka amakhono - isilwane ngokuvamile iziphatha kabi: ujikela imithelela ikhanda amazinyo basuka kungaluma ngisho noma alethe ukuthela izinselo zazo hlonipho idolo.
Abanye odokotela bezilwane ukuncoma anthelmintic ochotshoziwe ukungezwa ukugxusha, isilwane e uju inyama. Nokho, uma le ndlela empeleni aphethwe. Futhi uma ubuhle bakho uyenqaba izimpethu ngokuzithandela ubuthi?
Mhlawumbe kufanele nje ukuqeqesha isilwane sakho lomshado lesifanele kwemithi akhiqizwa ngendlela amaphilisi.
By the way, ngokuvamile anthelmintic for namakati has ngempela ukunambitheka kabi iphunga okunoshukela kakhulu, ngakho omunye umunwe azungeza emhlabeni isilwane nenkohliso yesibili ayisekho bayothenga.
Kungcono Yiqiniso, ukusizakala Piller, namanje okubhekiselwe kubo ngelithi "tabletkodavatelem" futhi uma leso ayikwazanga ukutholakala kufanelekile, singakunikeza anthelmintic ngaphandle kwalo.
Ngakho, thatha ithebhulethi ngesandla esisodwa, unclench ngomlomo wesilwane ngokucindezela nhlangothi zombili nemihlathi zaprokinte ikhanda lakhe.
Beka iphilisi njengoba ejulile ngangokunokwenzeka (hhayi olimini, noma ungase uqale ukuhlanza sokucasuka esibuhlungu izidakamizwa). Khona-ke ngokushesha asuse iminwe kusuka emihlathini namazinyo ikati somknite, kodwa ungavumi ke uphonsa ikhanda. Ukumpotopotoza uqhoqhoqho, uze ubone gulp.
Manje ungavumela ubuhle bakho, pet imnike bhisikidi (encane kakhulu). Uma izenzo zakho njalo wekugcina, ngaphandle abuhlungu, ikati engalamukeli imithi njengoba umkhuba, ngakho ngesikhathi esizayo ngeke ikakhulukazi simelane.
Ukunika isilwane sakho ukumiswa ngokunethezeka. Ngezinye imizuzwana emihlanu kuphela imithi: kungenzeka lift ikhanda laso silwane, zidonsa esihlathini kancane, ukwakha "isifaca" uthele imithi. Linda singagwinyi ukunyakaza (zivame ukulandela ngokushesha). Ukuze inqubo usebenzisa isipetu (ngaphandle inaliti), noma pipette ekhethekile.
Ithiphu: Uma ikati emibi, ungakwazi swaddle ithawula lakhe obukhulu, kusale ikhanda lakhe kuphela ngaphandle.
"Dexamethasone" ukuze amakati: yokusetshenziswa futhi impendulo
Husky eSiberia - incazelo zohlobo
Indlela igama inja - intombazane, futhi unqobe ubunkimbinkimbi abathintekayo
Aquarium izinhlanzi rasbora: incazelo, okuqukethwe zokukhiqiza kabusha kanye nokubuyekeza
Bangaki cat uzala? amanzi Ikati aphula - bangaki uzozala?
Kungani izinja uthanda ukhotha ubuso bethu?
Ignition Ikhoyili: izimpawu kanye izimbangela ukwehluleka
Njengoba kule "isisusa" ukuvula umngane kusuka kuhlu lwakho?
Indawo yokudlela "Birch Grove" ikumema ukuba uphumule emvelweni
Angazi kanjani ukupheka pasta? Qinisekisa ukuthi kulula!
Indlela ewusizo tincture black ziyadliwa? Izibuyekezo umsebenzisi
Circuit full: isici. izici yamanje wesifunda amadlambi
Doll Roxy ( "Winx") - Earth Fairy
Leli dolobhana Dzhanhot: guest house "Dzhanhot" futhi "Greenwood"
Ukwelashwa Ozone izinwele: incazelo inqubo, ubufakazi, ukubuyekezwa
Amaphrotheni: Ukubuyekeza kanye Ukukhetha
Uhlu imidlalo kuyi-computer nge-Gameplay ezithakazelisayo